Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeTahiti
Bukela ividiyo ngeTahiti
Bheka iTahiti eseNingizimu Pacific. Kuyinto enkulu kunazo zonke eziqhingini ze-118 nama-atoll ahlanganisa isiFulentshi I-Polynesia. ITahiti ise-Society Islands, isiqhingi esihlanganisa iziqhingi zase Bora Bora, I-Raiatea, Taha'a, Huahine neMoorea, futhi inesibalo sabantu abangama-127,000, cishe i-83% yabo bangabokhokho basePolynesia. Igama elidume ngokuthi 'iTahiti' alibonisi lesi siqhingi kuphela kepha neqembu leziqhingi ezakha iFrench Polynesia.
ITahiti yakhiwa yizintaba ezimbili zentaba-mlilo. Ngokwesimo 'sofudu', senziwa ngeTahiti Nui (ingxenye enkulu) neTahiti Iti (ipeninsula). Lezi ziqhingi ezimbili zixhunyaniswa yi-isthmus yeTaravao futhi zigqitshwe amabhishi amnyama.
IPapeete inhlokodolobha kanye nesikhungo sezokuphatha. Kwake kwaba yidolobha elinobuthongo, namuhla itheku lakhona limatasa nezimpahla ezithwala izimpahla, imikhumbi ye-Copra, imigudu yokunethezeka kanye nezikebhe ezihamba olwandle. Kunezindawo zokudlela zokudlela ezihamba eceleni kwendlela, izitolo ezigcwala imfashini yaseFrance, ubucwebe bamagobolondo nezinto ezenziwe ngezandla kanye nezindawo zokudlela eziningi ezisebenzela eTahiti, isiFulentshi kanye ne-Asia cuisine
IFa'a ibamba isikhumulo sezindiza samazwe omhlaba esakhiwe echibini elikhulu. Ngaphandle kwezindawo zokubala izinkampani zokuhlola izindiza, kune-counter counter, i-snack bar, indawo yokudlela kanye namahhovisi okuqasha izimoto nezitolo. Eduze, endlini ekhethekile enezitayela zaseTahiti, izingcweti zidayisa izimbali zezimbali nemigexo yamagobolondo.
ITahiti neziqhingi zayo kungenye enhle kakhulu kulo lonke elaseningizimu yePacific. AbaseTahiti bahlonipha kakhulu futhi baphana futhi banomusa. Ukuzwa abantu behleliwe bethi 'sawubona' emgwaqweni kubantu ongabazi noma ngisho nabadlula ngendlela akuyona into engjwayelekile. Iningi lezingane zaseTahiti zilungele i-rap ne-hip-hop, zenza noma zenza ezitaladini noma ezigcawini.
Ifilosofi yabantu, 'i-pe pea pea' (ukungakhathazeki), empeleni iyindlela yokuphila yesiTahiti. Yiba nesineke futhi ubanikeze inhlonipho kubo futhi uzothola noma yini oyicelile, kubandakanya ukumamatheka okukhulu. Banomusa kakhulu futhi bemukela abantu.
Yazi ukuthi uhambo lwakho lokuya eTahiti lungaba yinto yesikhathi esisodwa kepha ehlukile ngenxa yentengo ephezulu. Yize zingabophisi ngokomthetho, imibhangqwana eyandayo ibuye ivuselele izifungo zabo zomshado futhi bayohlala embhedeni balale, izimbali, amagobolondo nezimpaphe. Umkhwenyana usondela olwandle ngempoqo ephumayo. Umakoti wakhe, ophathwe esihlalweni sobukhosi se-rattan, ulindelwe olwandle olunesihlabathi esimhlophe. Ukushona kwelanga okumangalisayo, umculo nabadansi baseTahiti banezela kuma-ambiance. Umpristi waseTahiti “ushada” lo mbhangqwana awunikeze igama lawo lesiTahiti negama lesiTahiti lamazibulo awo.
Umbono ovame ukwamukelwa uthi amaPolynesia aqala ukuzinza ePacific azungeze i-4,000 eminyakeni edlule. Besebenzisa izikebhe ezenziwe ngokhuni ezihamba ngamapulangwe ezihlanganiswe ndawonye ngemicu yemvelo besebenzisa ulwazi lwabo lomoya, imisinga nezinkanyezi, abagibeli bokuqala abazimisele ukuhamba ngomkhumbi beya empumalanga, bexazulula amaqembu esiqhingi aphakathi kwesiQhingi saseCook kanye nesiFulentshi I-Polynesia phakathi kwe-500 BC ne-500 AD.
Isimo sezulu sihle! Isimo sezulu siyashisa. Amazinga okushisa aphakathi nendawo yi-27 ° C kanti amanzi echibini avale i-26 ° C ebusika ne-29 ° C ehlobo. Kodwa ungakhathazeki izindawo eziningi zokungcebeleka namakamelo amahhotela anomoya opholile noma opholile ngabalandeli bophahla.
ITahiti ihanjiswa yisikhumulo sezindiza iFa'a'a International, esiseduzane nedolobha elikhulu lasePapeete (Papy - et - tay). Zonke izindiza zomhlaba wonke zizofika eTahiti. Isithwali sezindiza sikazwelonke sisebenzisa izindiza kuzo zonke ezinye iziqhingi.
Indlela ejwayelekile yokuhamba nxazonke eTahiti ngemoto. “Iloli” langaphambili alisekho ngale ndlela (ibhasi lomphakathi elivulekile lomgwaqo elinamakhabethe abagibeli abazokhuma eceleni komgwaqo akhonze amadolobha ahlukene). Zithathelwe indawo ngamabhasi amadolobha futhi amanani entengo abiza kakhulu futhi amaningi azogcina enkabeni yedolobha elisondele emakethe. Ezinye izindlela zokuhamba zifaka ama-scooters noma izimoto ezizimele. Izimoto eziningi eziqashwayo zizoba yi-stick switch. Kunenqwaba yamabhayisikili ukuqasha ngentengo eshibhile. Lokhu kungumqondo omuhle impela ngamaSonto njengoba konke kuvaliwe futhi ungagcina ngokuthola iziqhingi.
IsiFulentshi nesiTahiti yizilimi ezikhulunywa kakhulu, kepha isiNgisi siqondakala kabanzi ezindaweni zabavakashi, kepha hhayi ezindaweni ezivame ukuhanjelwa (njengeziqhingi ezikude zeTuamotus). Izimpawu eziningi zikulimi lwesiFulentshi, ezimbalwa kakhulu zazo ngesiTahiti.
Kukhona izinto eziningi okufanele zenziwe eTahiti futhi kuningi ukubona nokuthatha izithombe. Uma kwenzeka ungaqala uhambo lokuya esiqhingini esiyindilinga (lwamakhilomitha ayi-70), okunye kokubonayo kufanele kufake phakathi izinto:
'Le Mashié'. Le yindawo enkulu emakethe kaPapeete enezitezi ezimbili lapho izinto eziningi zingathengwa khona. Thenga isidlo sakho sasemini lapha kanye ne- “Monoi” ethile. I-"Monoi" yi-oyela wasendaweni waseTahiti, onephunga elinamandla futhi onenani elihle. Kusetshenziselwa ukuthambisa kanye nokuthambisa isikhumba sakho. Futhi thenga i- “pareu”. Lokhu kuyindlela ejwayelekile yokugqoka yaseTahiti engaboshwa ngezindlela eziningi ezahlukahlukene (isembozo, ingubo, izikhindi, umjondolo). Ingasatshalaliswa njengendwangu yepikiniki noma ithawula lolwandle. Idalwe ngemiklamo yendabuko kanye nemibala egqamile eshisayo, ayibizi futhi yenza isikhumbuzo esifanele. Lokhu kuhle kakhulu ngokwazi abantu baseTahiti njengoba wonke umTahiti eyazi ukubopha eyodwa. ILe Marche futhi iyindawo lapho uzothola khona ubucwebe kanye namakhalenda amaningi, amakhadi okuposa, izinkomishi… Izithelo ezivuthiwe, insipho enephunga, ubhontshisi we-vanilla, izingubo zomdanso, izigqoko ezelukiweyo nezikhwama nemgexo yamagobolondo kuze kufike ezindlebeni zakho. thola emakethe. Itholakala enkabeni yedolobha futhi awukwazi ukuyiphosa.
Isiphepho i-Arahoho ngasohlangothini olusenyakatho neTahiti Nui. Indawo lapho kuqubuke khona isigaxa sogu emgwaqweni nalapho amagagasi ayo ewa ngaphakathi kwedwala.
ILas Trois Cascades. Izimpophoma ezintathu ezinhle ngaphakathi kwesiqhingi saseTahiti Nui.
IThanda leNkosi uPomare owesihlanu. Ithuna lokuphela kwenkosi yaseTahiti, lapho kwakuyinkosi.
I-Pointe Venus Lighthouse. Ibhishi lesihlabathi esimnyama namanzi acwebile aluhlaza ngentambo yokudoba. Idumile phakathi kwabaseTahiti. Vele uguqule amanzi olwandle ngokuzungeza kanye nezitolo ezinkulu ezimbili.
Ingadi yaseBotanical / Museum yaseGauguin. EPapeari, ogwini olusentshonalanga, ingadi yezitshalo eyenziwe nguHarrison Smith ilele eceleni kweMyuziyam yaseGauguin esimweni somlingo seMotu Ovini.
Ikhosi Yegalofu ye-Olivier-Breaud. Ungabaza ukwakheka okuhle kwalesi sifundo segalofu esisetshenziswe e-Atimoana tata ebabazekayo okwakungu-rum womhlaba amapulazi ngekhulu le-19th.
Arahurahu Marae. Indawo yenkolo ebuyiselwe equkethe izakhiwo ezihlukene zamatshe ezinikezelwe konkulunkulu bakudala nalapho imikhosi ebalulekile yayenziwa khona.
Iminyuziyamu. Kuyathakazelisa ukuvakashela iMnyuziyamu yaseTahiti naseziQhingini ezineqoqo elihle kakhulu lezingcezu ezindala kakhulu nezakha kabusha umlando. Imyuziyam emnyama kanye nomnyuziyamu waseGauguin kuyajabulisa ukubona ukuthi ufuna ukuphuma ekushiseni.
To'ata. Isikwele esinezindawo zokudlela ezincane kodwa futhi indawo ezoba kuyo yemikhosi kaJulayi ngomdanso nomculo wendabuko, iHeiva I Tahiti.
Yonke imisebenzi enamaphutha: ukusebenzisa i-surfing, i-scuba diving, i-snorkeling (izindawo eziningi zokungcebeleka zizokunikeza imishini yamahhala), ukuhambisa ama-canyoning, i-stingray kanye ne-shark feed, imidlalo yezamanzi, ukudoba olwandle okujulile, i-kitesurfing ... uyiqamba igama.
Futhi unethuba lokuhamba ngezinyawo, uhambo lwe-4WD, igalofu…
Ukudotshwa kwasolwandle okujulile kunqunyelwe eTahiti futhi kunzima ukukuthola.
Ukumba: uthole inkampani edumile yokudonsa, okuhlangenwe nakho kwethu ukuthi labo abanamawebhusayithi akude babephansi kakhulu ekuziphatheni nasekuphepheni, bengalungiselelwe kahle, futhi bengazange badlule kakhulu emarina.
Izitolo eziningi ezizungeze maphakathi nedolobha eliseduzane ne- “Notre Dame” zinezinto ezinhle ongazithenga.
Uma uphupha nge-tattoo, qiniseka ukuthi uyithola eTahiti njengoba amaphethini ekhetheke kakhulu futhi ekhombisa umoya walesi siqhingi. Kunezindawo eziningi zokuthathwa kwezimpawu zomzimba ezungeze iPapeete kufaka phakathi imakethe. Ungafuna futhi ukuthenga iparele elimnyama ukuze ulibuyise nawe. Uzothola amanye ngentengo ebiza kakhulu emakethe futhi.
Qaphela ukuthi ukufaka ichopping akuyona inkambiso eTahiti. Kuyaqala ukubonwa kwezinye izindawo zokudlela namahhotela eziqhingini ezinkulu, kodwa ngokuvamile abantu baseTahiti abalindelanga ukuthi izipho zakho zifakwe entweni yokugcina.
Ama- “Roulottes” (izitolo ezisheshayo ezinamasondo) ithandwa kakhulu ngoLwesihlanu kusihlwa ukuthola ukudla okuhle kwamaChinese, izidumbu kanye nezitsha zesitayela saseFrance. Ngeke uphuthelwe yindawo ngoba itholakala ngasogwini lwamanzi iPapeete. Ukudla okumnandi ongakholeki ngamanani entengo, esimweni esimnandi nasendaweni yendawo. Uma kungenzeka, yidla lapha njengokudla kwababili kungaphansi kokudla kwasehhotela (futhi uthola ukudla okuningi).
Ukudla okuyisiqhingi esikhulu ukuzama i- “poisson cru” (“inhlanzi eluhlaza” ngesiFulentshi.) Yinhlanzi entsha ebunjiwe enamakha kalamula nokhokho oxutshwe nemifino. Izinhlobo eziningi zingatholakala konke kubandakanya iPoisson Cru Chinois (isitayela saseChinese), iPoisson Cru Ananas (isitayela sikaphayinaphu). I-Parrotfish, i-ahi, i-mahi mahi, nezinye izinhlanzi ezintsha zivela kusoso olukhanyayo olwenziwe nge-vanilla yaseTahiti nobisi lukakhukhunathi. Ungaphuthelwa zezithelo ezishisayo zase-tropical.
Ama-Baguette atholakala kuso sonke isiqhingi ngentengo elunge kakhulu. Kanye nama-baguette, abantu baseTahiti badale “isamentshisi le-baguette” lapho yonke into kusuka ezinhlanzini kuya kufransi waseFrance ifakwe kuyo.
Qiniseka ukuthi uzama futhi i-Chinese ma'a tinito ethandwa kakhulu (okuyingxube yengulube, ubhontshisi wezinso, iklabishi laseChinese neMacaroni.)
Imicimbi yemindeni kanye nemikhosi yesikhathi semikhosi enkulu yisikhathi somkhosi omkhulu weTamara'a Tahiti (imidwebo yesitayela saseTahiti) lapho isidlo esinezingulube ezincelisayo, inhlanzi, isinkwa, isithelo, amabele kanye nobhanana we-fe'i kusongwe kuhhavini ngaphezulu kwezingqimba zamatshe ashisayo.
Uma ufuna ukudlela okuhle, bheka ubheke ePaea eningizimu yePapeete kuya eChez Remy noma eLe Carre eLe Meridien. Ukudla okunamanani amahle, kepha okumnandi.
Amathiphu: thola ushizi okhilimu waseFrance ekudleni kwasekuseni kumakhanda akho. Futhi, hlela ukudla kwakho. Izindawo zokudlela eziningi azivuli kuze kube yi-7PM. Amanye amahhotela abe nezindawo zokudlela eziningi ezisebenzela amamenyu ahlukene ngezikhathi ezihlukile zosuku, nezinguquko ngosuku, ezenzelwe ukukhetha okukhawulelwe nokungakwazi uku-oda okuthile wena, okubonile ngosuku olwedlule. Ezinye izindawo zokudlela kanye namabhizinisi esiqhingini asiseduze kwe-12-1: 30PM, ezinye kuze kube yi-3PM, ezingenza ukuthenga nokudla ngokuzithandela kube nzima.
Amabhodlela amanzi atholakala kalula. Ukuba yinsimu yaseFrance, iwayini livamile futhi kulula ukulithola. Njengoba lesi siyisiqhingi esishisayo, kutholakala imithombo eminingi yezithelo kusuka kuju lwephayinaphu iye kobisi lukakhukhunathi. Ngezinye izikhathi kungcono ukuqhekeka uvule owakho kakhukhunathi ngokwakho bese ukuchithela isidlo sasemini. Uma ungumuntu othanda ubhiya, iHinano Beer nakanjani izokuba munye ongathanda ukuyinambitha futhi ulethe amathini ambalwa ekhaya.
Umculo nokudansa kukhuluma indaba yabantu baseTahiti. Amahhotela amaningi abonisa ukuzijabulisa kwakusihlwa. Ukudansa kweqembu kuyatholakala nasenkabeni yedolobha iPapeete kodwa eduze kwe3AM. Ngeke nje uphume sekwedlule isikhathi, ukhathele kakhulu ukuthi uzobe uchithe isikhathi esiningi elangeni uthola lesi siqhingi. Kujabulele!
Indawo yokuhlala eTahiti ingahamba kusuka kunokhokho abahamba phambili kakhulu be-5-star ngama-bungatows angama-chapater, ezokuphepha, umgoqo, ichibi, izimpesheni zomndeni ezincane.
Izindawo eziningi zokungcebeleka ezinezikhungo zebhizinisi kusuka lapho ungafinyelela khona i-Intanethi ngesivinini esikhulu. IHhovisi Leposi LasePapeete livulwa phakathi nezinsuku kusuka nge-7.30AM ukuya kwi-11.30AM futhi lisuka ku-1.30PM liye ku-5PM / 6PM. NgoMgqibelo kusukela ku-7.30AM ukuya e-11.30AM.
Abantu bavame ukwazi ngeTahiti futhi Bora Bora kepha okulandelayo kungenye yeziqhingi ezinhle okufanele zivakashelwe:
ITahiti inelinye lamazinga aphansi obugebengu ngaphakathi France nezindawo zalo. Kodwa-ke, ubugebengu obuncane, njengokuqothuka nokuhlwitha isikhwama kwenzeka.